ကလိုစေးထူး: မှတ်မှတ်ရရ ပထမ
Posted by ကလိုစေးထူး at 11:02 PM
သီချင်းဆိုတာ ဆုရတယ်ဆိုတော့ အစ်ကိုကတော်လိုက်တာဗျာ လုပ်ပါအုံးဟိုတစ်ခါလို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး ဘလော့ပေါ်တင်ပေးပါအုံးဗျ လက်ရေးမလှ ဒို့ ဘ၀တဲ့လား ဒါဆို ကွန်ပျူတာနဲ့ ရိုက် ပထမဆုံးအချစ်အကြောင်းလည်းမပါဘူး ဒိုင်လျှိုထားတယ်း)
Sep 26, 2008, 11:23:00 PM
ပထမဆုံး ရီးစား နာမည်
ညီရေ့ မှတ်မှတ်ရရတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီး)
ပထမဆုံးတက်တဲ့ အ.မ.က.ချင်းက နံပတ်တခုပဲ ကွာတာနော် (၁၂) နဲ့ (၁၃)း)
ဥက္ကလာသားချင်း ဘာလို့ မတွေ့ဖူးကြပါလိမ့် -
Sep 26, 2008, 11:27:00 PM
တောင်ဥက္ကလာပ မှာကျောင်းတက်လာ တာ ကိုး
ကိုအောင်သာငယ် Tag game လုပ်မှဘဲ Blogger လောက မှာ ဥက္ကလာသား နဲ့ ဥက္ကလာ နဲ့မကင်း တဲ့
ကျောင်းတက် တုံးက ကျွန်တော့်ကို မတွေ့မိ ဘူးလား?
ကိုစေးထူး ဘေးနားမှာလေ ဗျာ.......ဟီးဟီး
ကိုစေးထူး ရေ.....တော်တော်များများ ပထမဆုံးတွေ
Sep 26, 2008, 11:46:00 PM
ကိုစေးထူးရေ့..ပျော်စရာတော့ ကောင်းသားနော်- ပထမ တွေပြန်တွေးရတာ။
Sep 27, 2008, 3:49:00 AM
မှတ်မှတ်ရရ ပထမ ရေးလဲ ဖတ်ကောင်းပ။
ကိုစေးထူး Tag ရင်တော့ ရေးဖြစ်မလား မသိ။ နန္ဒာ့ကို မြန်မာစာ ပြင်ပေး သင်ပေးအောင်လေ။
Sep 27, 2008, 6:43:00 AM
မတွေ့ချင်လို့ မခေါ်ပဲထားပါတယ်ဆိုမှာ ဒီဥက္ကလာနဲ့ ပက်သက်တာတွေချည်းပဲ။ ကျောင်းတုန်းက တွေ့သားပဲ တမင်ထားထားတာ။ ကိုအောင်သာငယ်ရေ အမှတ်တမဲ့တက်လိုက်တာ ကိုယ့်အမျိုးချည်းဖြစ်နေပါလားဗျ။ :P
Sep 27, 2008, 10:13:00 AM
ကိုစေးထူး 36 ဘတ်စ်ကား စီးတုန်းက ကားခရော မှန်မှန်ပေး ခဲ့ရလား။ .. ဟဲဟဲ။
Sep 27, 2008, 3:53:00 PM
ဟိ ဟုတ်တယ်နော် အဲလိုပဲရေးကြတယ်
ပထမဆုံးတွေ အများကြီး ဒိုင်လျှိုထားသေးတယ်
ပထမဆုံးတွေထဲကမှ မှတ်မှတ်ရရ မရှိတဲ့သဘောပေါ့လေ(just kidding)
မှတ်မှတ်ရရတွေထဲက ပထမဆုံး ရဖူးတဲ့ လက်ဆောင်ကို မမေ့နိုင်ပဲ တော်တော်ပျော်တတ်ခဲ့တာ လေးစားတယ်
အနော်ဆိုရင် ဒေါပွနေမယ်ထင်ရဲ့ :)
Sep 27, 2008, 10:00:00 PM
ပြားချပ်ချပ် ပထမဆုံး ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုစေးထူးရေ..
ဂီတကို တကယ်ဝါသနာပါတယ်နော်။ ငယ်ငယ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး၊ ကိုယ်တိုင်ဟဲ နေပြီဆိုတော့ ဇ က မသေးဘူး ဆိုရမယ်။
အမလဲ သီချင်းတွေကို အသည်းစွဲပဲ။ နားထောင်တာပါ။
Sep 28, 2008, 12:24:00 AM
ကိုစေးထူးရေ - Tag ကိုဖြေသွားတာလေး ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဥက္ကလာစာတိုက်မှတ်တိုင်နားက ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ နှစ်ရှည်လများနေခဲ့ပါသေးတယ်။ လွယ်အိတ်ကလေး တစောင်းလွယ်ပြီး ၃၆ တွယ်စီးနေတာ ကိုစေထူးပေါ့လား။ ကျွန်တော်က အဲဒီတုန်းက အထဲဘက်မှာ ထိုင်နေတာဗျ။
Sep 28, 2008, 8:15:00 AM
Sep 28, 2008, 3:26:00 PM
ကိုစေးထူး… အမျိုးစပ်ရင်တော်လို့ ရပြီ… အပေါ်က ဥက္ကလာသားတွေ အမျိုးစပ်သွားတော့ ကျွန်မ ဥက္ကလာသူကလဲ ထပ်ပြီး အမျိုးစပ်လိုက်တယ်… ဥက္ကလာမောင်နှမတွေပေါ့… မှတ်မှတ်ရရ ပထမကလဲ ၀တ္ထုလေး တပုဒ်လိုပါပဲလား…
Sep 28, 2008, 11:40:00 PM
ကျွန်တော့်အတွက် ရန်ကုန်မှာ မျက်စိအလည်ဆုံး၊ မသွားတတ်ဆုံးနေရာ ဥက္ကလာ ။
ကျော်သူရဲ့ လှလေးစိန်ိတီဗီ ဇာတ်ကားလေး သတိသွားရမိတယ်။
ကိုယ်ပိုင်သီချင်းနဲ့ စင်ပေါ်တက်ဖျော်ဖြေနိုင်တာတော့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။အခွေလေးထုတ်ပါလား (မြှောက်ပေးလိုက်ဦးမယ် :-D)
ပထမဆုံးတွေ က ပျော်စရာ..လွမ်းစရာ..
Sep 29, 2008, 4:20:00 AM
“မှတ်မှတ်ရရ ပထမ” က ချစ်စရာကောင်းပါတယ်…
ဥက္ကလာမောင်နှမ တွေ ချမ်းမြေ့ပါစေ …
ကျွန်မ က တောင်ဥက္ကလာပ အ.မ.က. ၂၃ ကပါ…
Oct 1, 2008, 9:41:00 AM